Ngaba i-SEO kunye nemidiya yoluntu ixhunyiwe?
Impembelelo yeMidiya yezoLuntu kunye nendlela echitha ngayo indawo yoPhando lweeNjini zoPhando mhlawumbi enye yeyona mibuzo. Ndiyathetha iimfihlakalo ezinje: indlela amajelo asekuhlaleni achaphazela ngayo i-SEO? Ngaba ezi zimbini zicinga ngokubambisana, kungekhona nantoni na, okanye akukho nto?
Lapha kuza umpangi - impendulo mfutshane nguyewe, yenzayo. Kodwa kuya kuba kuchanekileyo ukujonga ingcaciso yesibini, ebanzi nangaphezulu. Masijamelane nayo - imidiya yoluntu ngokuqinisekileyo inxulumene ne-SEO, kodwa ingaba yintsebenziswano emva kwayo yonke into? Ngelishwa, ndivakalelwa ngento encinane nje - i-media media ayikho, ubuncinane, impembelelo kwi-SEO. Akuncedi nje ukulungiswa kocando ngendlela abantu abaninzi bakholelwa ngayo.
Ngezantsi ndiza kudibanisa am macebiso kunye nolwazi oluncedo olunikezwa ngamalungu eqela leGoogle ngokwalo - best tech support companies. Okokuqala, masikuthathele ngokukhawuleza - i-giant search industry giant ayizange ibe naluphi na ukuqinisekiswa kwimidiya yezokuhlalisana kwi-factual ranking factor. Ndiyathetha, ewe, amajelo asekuhlaleni asekho phakathi kweendlela ezifanelekileyo zokufumana ukubonakala kwe-inthanethi engcono kumxholo. Kwaye, ekugqibeleni, konke malunga ne-SEO. Yintoni esinokuyifumana ngokuqinisekileyo malunga nendlela amajelo asekuhlaleni achaphazela ngayo i-SEO? Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi impendulo echanekileyo enokwenzeka, kubonakala ukuba imithombo yeendaba yoluntu inokunceda ngokwenene i-Search Engine Optimization isebenza ngokupheleleyo. Kodwa ndiyamangalisa, ngaba i-giant search ithawule iinguqu ezingaphezulu zentlalo kwi-algorithm yayo yamanje?
Ngexesha, i-Google search algorithms ayizange ivezwe. Yingakho indlela yodwa yokuqonda iipatheni zokuziphatha zebhodi yokukhangela yeGoogle ihlolisisa ngasinye isiphumo kwisiphumo sokuphila kwangempela. Ngaba unokucinga, indlela yokuchitha ixesha kunye nokusebenza nzima kangakanani le misebenzi yophando? Ewe, masibuyele kwinqanaba. Iimidiya zentlalo zichaphazela njani i-SEO? Sinokuthi sithathe imidiya yoluntu nje nantoni na, kodwa kungeyona nto ecacileyo ekuhlaleni, ngokwemigosa yeGoogle. Ewe, nangona kunjalo, akuthethi ukuba zonke iindaba zentlalo asinayo impembelelo kwizinga zonke, ngenxa yokuba ibuye iqinisekiswe yi-Google ukuba imidiya yoluntu ngokwayo ayimelanga kwisimo.
Ndiyakholwa ukuba impendulo engaphezulu okanye engaphantsi ingabonwa ngandlela-thile malunga negama "ukulungiswa. "Njengoko eli gama likhankanywe kwimeko yokubuyiselwa kwakhona kweNgcaciso yeeNgcaciso zeeNgcaciso zeeNgcaciso ezinikezelwe ngu-Searchmetrics ngo-2016. Ndiqinisekile ukuba abafana bahamba ngendlela efanelekileyo. Ngaloo ndlela, impendulo echanekileyo yendlela amajelo asekuhlaleni achaphazela ngayo i-SEO iyacaca-ewe, yenzayo. Kodwa akukhokho ubudlelane ngqo okanye ngokulandelelana kabini apho. Ngoko, ukugcina iliso ekwenzeni ukukhuthazwa ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zeendaba zoluntu kusisigqibo esenziwe kakuhle. Ngexesha elifanayo, i-Search Engine Optimization idinga imizamo kunye nexesha elichanekileyo ngendlela yayo.